Puntland oo amar ku bixisay diyaaradan aan fasax ka heysan inaysan ka degi karin magaalada Buuhoodle | RBC Radio
Puntland oo amar ku bixisay diyaaradan aan fasax ka heysan inaysan ka degi karin magaalada Buuhoodle
Gaalkacyo (RBC Radio) Madaxweyne ku-xigeenka Puntland,Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar (Camey) ayaa sheegay diyaarad aan fasax ka heysan wasaaradda duuliska hawada Puntland inaysan ka degi jarin magaalada Buuhoodle.
Wuxuu sheegay madaxweyne ku-xigeenka inay joojiyeen diyaarad dooneysay inay ka degto magaalada Buuhoodle,taason fasax ka heysan wasaaradda duuliska hawada Puntland.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa inta ku daray samafalayaal ajanabi ah inay diyaaradda la socdeen,balse aysan dowladda war u heyn markii hore ujeedka ay diyaaradda ugu socoto magaalada Buuhoodle.
“Sababta diyaaradda loo joojiyay waxay ahayd inaysan dowladda ogeyn ujeedada ay ugu socoto Buuhoodle,waan la hadalnay waxayna noo sheegen in si qaldan wax loogu sheegay ujeedkuna uu yahay inay caawiyaan dadka abaartu saameysay.” ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Puntland.
Eng. Camey, wuxuu sheegay diyaaradaha doonaya inay tagaan magaalada Buuhoodle inay la soo xiriiran wasaaradda duulimaadka Puntland si loo hubiyo,waxuuna ku tilmaamay ujeedka loo celiyay diyaaradda ku socotay Buuhoodle inay la xiriirto xaqiijinta nabadgalyadda.
Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu iska diiday maamulka inuu siyaasadeynayo gurmadka la gaarsiinayo Buuhoodle,balse wuxuu sheegay kaliya inay doonayaan sidii loo qaxoojin lahaa nabadgalyadda.
Puntland ayaa amarkan soo saartay xilli ay maalmihii dambe gaarayeen magaalada Buuhoodle diyaaraddo sida gargaar loogu tala-gay dadka ay abaartu saameysay,waxaana Buuhoodle u dhintay cudurada abaarta ka dhashay dad ka badan labataan ruux.